Ukukhanya kwe-LED | I-china Abakhiqizi bokukhanya kwe-LED, abahlinzeki
ibhokisi lokudlula / lokudlulisa iwindi
amanzi amanzi plastic PVC -...
amanzi amanzi PVC plastic ...
ipayipi lensimbi engagqwali
iphepha ibhokisi amakhadibhodi Uhlaka p ...
konke-metal net eyinhloko emoyeni f ...
v-uhlobo ukusebenza kahle okuphakathi v ...
isikhwama esikhwameni sokuhlanza umoya nge ...
ukwahlukanisa ukusebenza kahle okuphakathi ...
isihlungi somoya esisezingeni eliphakeme
ukusebenza kahle okuphezulu nge ...
V- ezimise kahle eliphezulu f ...
partiton pleat efficie ephezulu ...
uhlobo lwethangi elingafani nokwahlukanisa ...
uhlobo olusha ezingeni eliphezulu aluminium ...
Indwangu ye-PVC noma i-aluminium rapi ...
igumbi elihlanzekile eliqhutshwa ugesi ...
ngokwezifiso alu aluminium fra ...
ehlanzekile melamine resin panel ...
othomathikhi beya qualit ...
uhlobo lwesitebhisi olungaphambi kokufakwa ...
ashisayo bacwilisa ibala lashukumisa ...
lashukumisa ikhebula perforated ...
okuphansi noma okuphakathi kwamandla overh ...
3 core 4 core XLPE ngci ...
Amanzi-ubufakazi 9W 18W 25W LED ...
Thayipha umucu wokukhanya we-keel
LED ukuhlanganiswa braket ligh ...
Ukonga amandla 150W 250W 400 ...
rock uboya isangweji panel WI ...
Class 1 ongaphakeme umsindo ukugqwala ...
Isigaba 1 sokonga amandla ...
Isigaba 1 esonga ugesi wotho ...
Aluminium gusset ipuleti suspe ...
70W 100W 150W voltage enkulu ...
Ama-plas enjoloba we-Class 1 class 0 ...
18W 40W 80W lalihlehlisiwe LED SM ...
Amanzi-ubufakazi manzi-ubufakazi tri -...
uthuli olukhululekile olunamandla 14W ...
Isigaba 1 14W 18W 28W inverte ...
ubufakazi bokuqhuma nokulwa ne-c ...
ukukhanya kwe-ultraviolet germicidal
insimbi engagqwali abandayo iphuma ...
ukukhanya kwezokwelapha okuhlanzekile kwe-med ...
uhlobo 1 oluhlehlisiwe luhlanzekile ...
ikilasi 1 wotho onqenqemeni ukukhanya okuhlanzekile
isigaba 1 sokwehla emuva noma okuphansi ...
i-aluminium ingxubevange yehla izinyembezi ...
okungaphakathi okungama-400mm 500mm okungenasici ...
i-therma engenamlilo ...
ashisayo zinc bacwilisa galv ...
abandayo iphuma steel ikhoyili kubanda ...
anti-ngomunwe GL galvalume st ...
PU polypurethane isemishi p ...
insimbi engagqwali ikhekhe lezinyosi s ...
iphepha lezinyosi s fireproof ...
isisindo esincane se-aluminium uju ...
aluminium ikhekhe lezinyosi ...
50mm 75mm 100mm ukujiya p ...
isihlabathi sedwala lesiliconi elingenamlilo ...
engangenamlilo MGO ibhodi magnesi ...
Amawindi anemagnethi yesandla ...
Umuthi wesibhedlela sezokwelapha ...
igumbi lensimbi elihlanzekile
Kwenziwe ngentando slidin okuzenzakalelayo ...
Imithi Yezentengiselwano Yezimboni ...
Igumbi elihlanzekile leyunithi ehlanganisiwe ...
Ikhwalithi ephezulu ye-Aluminium ...
OEM ngokwezifiso Wangcwaba Khanyisa ...
2020 Ikhwalithi ephezulu Paper Hon ...
China Umkhiqizi Viny ...
Isango Eliphezulu Lokusebenza Eligcwele ...
Ifektri Yeminyaka Engu-18 Ifakwe ...
OEM ngezifiso Electrostati ...
Factory Mahhala isampula Steel F ...
Ifektri eshibhile Ukuhlanza Okushisayo ...
2020 Good Quality Fiblas ...
Isampula yamahhala ye-Steel Safet ...
China Intengo eshibhile Ahu Air C ...
Isivalo Esisha Sokufika Vala ...
Ukukhanya okukhanyayo kuphuma kuyisicaba ngokuphelele, nge-Angle ekhanyayo ebanzi. Idizayini ekhethekile yesekethe, ukugwema isibani esisodwa esibi kuthinta umphumela jikelele, ngaphandle kokuphazanyiswa ngomsakazo, ngeke kungcolise imvelo. Ukonga amandla, ukukhanya okuphezulu, akukho mercury, akukho infrared, akukho ULTRAVIOLET, akukho ukuphazamiseka kwe-electromagnetic, akukho mphumela oshisayo, akukho radiation, akukho mkhuba we-stroboscopic. Isisindo esincane futhi kulula ukufaka. Ifanele amahhotela, amakamelo okuhlangana, amafemu noma amahhovisi, UKUSETSHENZISWA kwezebhizinisi, izindawo zokuhlala noma zomphakathi, izikole nezibhedlela lapho kudingeka khona ukonga amandla nombala ophezulu wokukhanyisa izinkomba.
I-18W 40W 80W ikhiphe isibani esihlanzekile se-SMD segumbi elihlanzekile
Umklamo wohlaka lwamalambu we-fluorescent ahlanzekile ushumeke kakhulu futhi usondele ophahleni. Umzimba wesibani nesembozo sangemuva sigcwele ukubekwa uphawu kwabantu abaningi. Akukho uthuli, okulula ukuluhlanza, akukho ukukhanya. I-semiconductor diode yakamuva iholele ubuchwepheshe bokukhanyisa buyithuthukisa kakhulu impilo yomthombo wokukhanya, futhi ayiqukethe i-mercury kumalambu wendabuko we-fluorescent, alungele imvelo kakhulu. Isibhedlela, ikhemisi, ukucutshungulwa kokudla, ukugcinwa kanye nokukhanya kwegumbi lezimboni ukukhetha okuhle. Izinhlobo ezihlukene zosayizi womzimba nezinhlobo zomthombo wokukhanya ziyakhethwa. Isetshenziselwe izinga le-100-10000 lezikhathi zenhlanzeko.
Ukukhanya kwamanzi kwe-9W 18W 25W i-chip chip light-proof light
Ukukhanya kuhlangabezana nesilinganiso se-IP65. Idizayini yokufaka uphawu engenamanzi, engenawo umswakama, isakhiwo esinengqondo, esihle futhi esivulekile, ukuklanywa kokukhiya kusebenziseka kalula, kulula ukufaka nokugcina. Umnikazi wesibani sekhanda elilodwa, i-250V yekhwalithi ephezulu yelangabi epulasitiki yobunjiniyela, amandla aphakeme womshini, ububanzi nokuphakama okuqhubela uhlobo lokujikeleza, ukusebenza okuhle koxhumana naye. Idizayini yenoveli, isakhiwo esihlanganisiwe, ukubukeka okuhle, okulula ukufaka nokugcina, ukuqala okusheshayo. Ifanele izindawo ezingaphandle nezingaphandle ezinemfuneko yokungenwa ngamanzi, ubufakazi bokuthuli kanye nobumswakama.
70W 100W 150W voltage enkulu LED light-project light
Umthunzi wokukhanya wenziwe ngekhwalithi ephezulu ye-aluminium die casting, umthombo omuhle kakhulu wokushisa ukushisa kokukhanya wenziwe ngobuhlalu bezibani zokukhanya okukhazimula kakhulu, ukukhanya okuphezulu, nokusetshenziswa okuzinzile; Ukuhlinzekwa kwamandla okuqhubekayo njalo kwenzelwa ukuqinisekisa ukusebenza kahle kwezibani. Kufanelekile ukukhanyisa okuphezulu endlini, okufana neworkshop, izindawo zomphakathi nokunye ukukhanya kwesikhala eside.
I-180V ~ 220VAC i-aluminium ingxubevange ebandayo egingqiwe i-LED phansi
Umzimba okhanyayo wenziwe nge-aluminium alloy precision die-casting, isakhiwo se-ultra-thin, imodi yokukhipha ukukhanya okuphansi, ukwelashwa okuphezulu kokushisa okuphulukisa ukwelashwa, ukumelana nokugqwala. Uhlelo lokusetshenziswa kwesibani lunikeza i-LEDSMB2835 ngokuya nge-American Energy Star standard, ngokubola okuncane kokukhanya nokusebenza kahle kokukhanya okuphezulu. Ipuleti le-Mitsubishi optical diffusion, ukukhanya okuthambile, ukukhanya okuphezulu kokukhipha ukukhanya Ukusekela amandla we-high factor ahlukaniswa namandla kagesi wamanje, iskimu sokuklama esezingeni eliphakeme, ukukhetha izinto eziqinile, ukuhlolwa okunzima, ukuqinisekisa ukuthi amalambu asebenza impilo ezinzile neyinde. Indawo esebenzayo: Isikhungo sobuciko seMnyuziyamu, ikhaya le-boutique, ihhotela eliphakeme, inxanxathela yezitolo ephezulu nokunye ukukhanyisa ukhiye wasendlini.
i-aluminium gusset ipuleti elilengisiwe i-LED ukukhanya kwephaneli elihlanzekile
Ukukhanya okukhanyayo kuphuma kuyisicaba ngokuphelele, nge-Angle ekhanyayo ebanzi. Idizayini ekhethekile yesekethe, ukugwema isibani esisodwa esibi kuthinta umphumela jikelele, ngaphandle kokuphazanyiswa ngomsakazo, ngeke kungcolise imvelo. Ukonga amandla, ukukhanya okuphezulu, akukho mercury, akukho infrared, akukho ULTRAVIOLET, akukho ukuphazamiseka kwe-electromagnetic, akukho mphumela oshisayo, akukho radiation, akukho mkhuba we-stroboscopic. Isisindo esincane futhi kulula ukufaka. Ifanele amahhotela, amakamelo okuhlangana, amafektri noma amahhovisi, ukusetshenziswa kwezebhizinisi, izindawo zokuhlala noma zomphakathi, izikole nezibhedlela lapho kudingeka khona ukonga amandla nombala ophezulu wokukhanyisa izinkomba.
Isigaba 1 sokonga ugesi wotho onqenqemeni lwe-LED
Ukukhanya okukhanyayo kuphuma kuyisicaba ngokuphelele, nge-Angle ekhanyayo ebanzi. Idizayini ekhethekile yesekethe, ukugwema isibani esisodwa esibi kuthinta umphumela jikelele, ngaphandle kokuphazanyiswa ngomsakazo, ngeke kungcolise imvelo. Ukonga amandla, ukukhanya okuphezulu, akukho mercury, akukho infrared, akukho ultraviolet, akukho ukuphazamiseka kagesi, akukho mphumela oshisayo, akukho radiation, akukho mkhuba we-stroboscopic. Isisindo esincane futhi kulula ukufaka. Ifanele amahhotela, amakamelo okuhlangana, amafektri noma amahhovisi, ukusetshenziswa kwezebhizinisi, izindawo zokuhlala noma zomphakathi, izikole nezibhedlela lapho kudingeka khona ukonga amandla nombala ophezulu wokukhanyisa izinkomba.
Isigaba 1 sokonga amandla wensimbi engagqwali onqenqemeni lwe-LED
Ukukhanya okukhanyayo kuphuma kuyisicaba ngokuphelele, nge-Angle ekhanyayo ebanzi. Idizayini ekhethekile yesekethe, ukugwema isibani esisodwa esibi kuthinta umphumela jikelele, ngaphandle kokuphazanyiswa ngomsakazo, ngeke kungcolise imvelo. Ukonga amandla, ukukhanya okuphezulu, akukho mercury, akukho infrared, akukho ultraviolet, akukho ukuphazamiseka kagesi, akukho mphumela oshisayo, akukho radiation, akukho mkhuba we-stroboscopic. Isisindo esincane futhi kulula ukufaka. Ifanele amahhotela, amakamelo okuhlangana, amafemu noma amahhovisi, UKUSETSHENZISWA kwezebhizinisi, izindawo zokuhlala noma zomphakathi, izikole nezibhedlela lapho kudingeka khona ukonga amandla nombala ophezulu wokukhanyisa izinkomba.
Ikilasi 1 lokonga amandla onqenqemeni lohlobo lwe-LED light panel
Ukukhanya okukhanyayo kuphuma kuyisicaba ngokuphelele, nge-Angle ekhanyayo ebanzi. Idizayini ekhethekile yesekethe, ukugwema isibani esisodwa esibi kuthinta umphumela jikelele, ngaphandle kokuphazanyiswa ngomsakazo, ngeke kungcolise imvelo. Ukonga amandla, ukukhanya okuphezulu, akukho mercury, akukho infrared, akukho ULTRAVIOLET, akukho ukuphazamiseka kwe-electromagnetic, akukho mphumela oshisayo, akukho radiation, akukho mkhuba we-stroboscopic. Isisindo esincane, okulula ukusifaka, esifanele amahhotela, amakamelo enkomfa, amafektri noma amahhovisi, ukusetshenziswa kwezebhizinisi, izindawo zokuhlala noma zomphakathi, izikole, izibhedlela zidinga ukonga ugesi nokukhanyisa kwemibala ephezulu.
I-Class 1 grille light-proof grille-proof ye-Class 1
Ihlanganisa ukusatshalaliswa kokukhanya okuhle kakhulu, ukulahleka kwamandla aphansi nokulawulwa kokukhanya kube yizinkanyiso ezilodwa ukufezekisa izinga eliphakeme lezidingo zokukhanyisa amahhovisi. Ingafaniswa nezinketho zamabhubhu aphindwe kabili, amathathu, amane, afanele izidingo ezahlukahlukene zokusatshalaliswa kokukhanya okushelelayo, isilinganiso sokukhipha ukukhanya esingaphezu kwama-70% evolumu encane, efanelekile ukuthutha, ukugcina, ukufakwa. Uhlamvu “V” lumele okushumekiwe, kuthi u “X” umele uphahla. Ifanele izakhiwo zamahhovisi, amahhovisi, izinxanxathela zezitolo ezinkulu, amakamelo okulinda, amafektri, izikole, izibhedlela nezinye izindawo zomphakathi ezisendlini.
Ukonga amandla 150W 250W 400W ukukhanya kwezimayini ze-LED
Ifanele izitshalo zezimboni, izinxanxathela zezitolo, izitolo ezinkulu, ihholo lokulinda, ihholo lokulinda, isikhungo sombukiso, indawo yokuvivinya umzimba nokunye ukukhanyisa.
I-LED yokuhlanganiswa kwe-braket light yehhovisi, yokuhlala, ukusetshenziswa kwemali
Idizayini yenoveli, ukubukeka okuhle, ivolumu encane. Ifanele ihhovisi, ikhaya, ukukhanya kwezebhizinisi, njll.